एमाले-माओवादी एकताः प्रचण्डमाथि चिनियाँ दबाब !
डा. सुरेन्द्र केसी/राजनीतिक विश्लेषक
काठमाडौं, १८ असोज– नेपाली राजनीतिमा असोज १६ गते सोमबार एकाएक नयाँ तरंग सृजना भयो । जसले आम नेपालीसँगै नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने सबैको ध्यान केन्द्रित भयो । लामो समयदेखि आ–आफ्नै राजनीतिक र सैद्धान्तिक पहिचान भएको नेकपा एमाले र बर्गीय समानताका लागि लामो जनआन्दोलनको नेतृत्वको गरेको नेकपा माओवादीको मूल पार्टी माओवादी केन्द्रबीच एक्कासी पार्टी एकिकरणको हल्लाले नेपाली राजनीतिक बृत्त एकाएक गर्मायो ।
पत्याउने आधार छैन
एमालेले अपराध र आतंकको संज्ञा दिदै आएको माओवादी जनयुद्ध र माओवादीले संसोधनवादी दक्षिणपन्थी धारोन्मुखको आरोप लगाउँदै आएका एमाले जनले अहिलेसम्मको आ–आफ्नो वैचारिक धरातलमा सहजै सम्झौता गर्लान भनेर विश्वास गर्ने वातावरण दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा भने देखिएकै छैन ।
एउटा कुरा चाहिँ अवश्य के हुनसक्छ भने, पछिल्लो समय चतुर खेलाडीका रुपमा देखिएका कमरेड प्रचण्डले कुनै नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने खुट्किलोको रुपमा एकताको चर्चालाई उपयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तै नाकाबन्दीबाट ह्वात्तै आफ्नो उचाइ बढाएका ओली कमरेड पनि विरक्त भएर बसेका माओवादी कार्यकर्तालाई एमालेप्रति आकर्षित गर्न सफल हुन सक्दछन् । जसले दुवै पार्टीलाई केही न केही लाभ हुन पनि सक्दछ । तर जन्मकालदेखि एकअर्कालाई वर्ग दुश्मनको व्यवहार गर्दै आएका यी वामपन्थी पार्टीबीच एकीकरणको कुरा भने जति सहज चाहिँ छैन ।
सिद्धान्तनिष्ठ छ र ?
अहिले दुबै दलका नेताहरुले कार्यकर्ताहरुको चर्को असन्तुष्टिकाबीच जसरी कुरा बाहिर ल्याए, के यो सद्धान्तनिष्ठ छ ? के यसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन ? यदि यसो हो भने यसलाई बेठिक भन्न मिल्दैन । तर नेपालमा जुन राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ, त्यो हेर्दा यो एकदमै अप्राकृतिक, सत्ता केन्द्रित छ ।
यो अवस्था हेर्दा कहीँ पनि पत्याउने अवस्था भने छैन । हिजो एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकाएक आफ्नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवासँगको शर्तबन्दीमा प्रधानमन्त्री भएका उनले पदबाट निस्किएपछि एकाएक धोका दिए । प्रचण्डको व्यक्तिवादी चायुर्यता, यो स्वार्थी र सत्ता केन्द्रित प्रबृत्ति हो । त्यसकारण यसै होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन ।
प्रचण्डमाथि चिनियाँ दबाब !
नेता तथा कार्यकर्तास्तरमा देखिएको असन्तुष्टि र बिरोधले पनि माओवादी भित्र यो विषयमा यसअघि कुनै पनि किसिमको छलफल नै नभएको बुझिन्छ । एमालेको पनि कार्यकर्तास्तरमा चर्को बिरोध छ । यी सबै कुरा सामाजिकसञ्जालमा छताछुल्ल पोखिएका छन् ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा कुनै ठूलो शक्तिको दबाब बाहेक यो एकताको आधार केही छैन । त्यो शक्ति अनुमानित चीन नै हो । यो दबाबमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै परेका छन् । माओवादीकै केही प्रमुख नेताहरु यो कुराको पूर्ण बिरोधमा देखिए । नेकपा एमाले चीनसँग नजिक देखिएका बेला अन्य सबै शक्ति भारतँग नजिक भए । जसका कारण एमालेले माओवादीलाई आफ्नो हातमा लिएको हुनसक्छ । तर प्रचण्ड बिलीन हुने संकेत हो यो ।
जसरी नेपाली राजनीतिका चतुर पात्र मानिने कमल थापा अहिले कमजोर भए त्यसैगरी प्रचण्ड पनि बढी चतुर भएका कारण बिलीनताको बटोमा मात्रै हिँडेका हुन् । यो एकता भयो भने पनि उनलाई केही खास फाइदा हुँदैन । खास महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एकता गर्ने एकाएकको यो हल्ला अपारदर्शी छ, त्यसैले पनि यो भित्र कुनै ठूलो रहष्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही एकता भइहाले पनि दीगो होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्न ।
लोकान्तरकर्मी मनीषा अवस्थीले केसीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित असोज १८, २०७४ मा प्रकाशित